Isandla | Isakhelo sebhedi ephindwe kabini yomthi
Abenzi beFanitshala yoMthi yesiNtu eSiko eTshayina
Ekhaya > Iimveliso > Ibhedi > Ibhedi ephindeneyo
Isakhelo sebhedi ephindwe kabini yeplanga ngumandlalo webhedi owela phakathi kwamawele kunye nokumkanikazi. Yibhedi enobungakanani obufanelekileyo, enika imvakalelo eyongezelelekileyo kumntu okhule eyedwa, okanye imvakalelo emxinwa ngandlel’ ithile kwisibini.
Amagama amabini kwaye agqityiwe ayahambelana. EUnited States, ukugqiba kugqibele ngokuba lelona gama libaluleke kakhulu ukuba lisetyenziswe, ngoko awuzukubona abenzi baseMelika bebhengeza iibhedi eziphindwe kabini ngokwesiqhelo. Kwezinye iindawo zehlabathi, ukuphinda kabini lelona gama liqhelekileyo.
Inkampani iCustom Wooden Double Bed Frame ibisoloko isebenzisa umgangatho ophezulu wezinto ekrwada kwaye yadlula ngokuKhetha Ngononophelo, imfezeko yeemfuno zobugcisa, kunye noyilo olulodwa lwesimbo, ubugcisa obugqwesileyo, kunye nenkonzo enyanisekileyo, iphumelele ubabalo kubathengi, yaphumelela ngaphezulu kweshumi lesizwe. inkangeleko kunye neepatent zoyilo olutsha olusebenzayo, kwaye yaba luyilo lokuqala lweemveliso zeshishini iNkokeli.
MA02 Suite White-Ibhedi
MA02 Suite Grey - Ibhedi
Igumbi lokulala eliphindwe kabini leFanitshala yeFanitshala yoYilo
*Ifanitshala yegumbi lokulala*Ibhedi yamawele aphindwe kabini kunye noBunye*Izitayile zangoku kunye nezimbo zeNordic.
Ifenitshala yeGumbi yoMthi yala maxesha iMawele amabini
Ifenitshala yokulala yoMthi ekumgangatho ophezulu
Ibhedi yanamhlanje ephindwe kabini ibhedi yeNordic elula yoQoqosho ibhedi
Ibhedi yanamhlanje ephindwe kabini eyongayo.
Igumbi lokulala eliphindwe kabini ibhedi eqinileyo yamaplanga
Igumbi lokulala eliphindwe kabini lale mihla.
Ibhedi yokhuni yaseMantla Yurophu 1.8m ibhedi ephindwe kabini yale mihla enekontrakthi 1.5m ibhedi encinci yosapho
Double Bedroom Wedding Bedroom Ifanitshala yomthi
I-Handuan kwi-No.19, i-Kangtai South Road, ibhloko B, i-Shatou Industrial Park, i-Jiujiang Town, iSithili saseNanhai, i-Foshan City Iimveliso eziPhambili zebhedi yokulala yomtshato. Ulawulo olubanzi lomgangatho lwenziwa ukuqinisekisa ukuba imveliso idibana nayo yonke imigangatho yomgangatho enxulumeneyo. yenziwe ngokusekelwe kwizinto ezikumgangatho ophezulu. Ukhululekile kwimvakalelo yokunxibelelana, inokuzisa amava okunxiba kakuhle. I-Handuan iyilwe ngobuchule igxile kubanxibi. Umlinganiselo womzimba, ukulungeleka kwentshukumo kunye nenqanaba lokuthuthuzela yimiba enyanyekelwa ngokunzulu ngabayili bempahla.
MA01 suite ibhedi engwevu
Professional 1.5m 1.8m edityanisiweyo ibhokisi ibhedi uxinzelelo lwegesi multifunctional abavelisi ibhedi abavelisi